Snapchat ndeimwe yemapurogiramu ekugovana mavhidhiyo anozivikanwa anokubvumira kutora mapikicha, kuwedzera mavara, kurega mavhidhiyo uye kugovana navo kune shamwari dzako uye vadikanwa avo vanogona kungotarirwa kwemaminitsi mashoma. Uye, apa ndiyo nzira yekudzorera nayo mhinduro dzinotsvaga pa Snapchat? Ichi ndicho chinoshamisa zvikuru uye chinoshamisa chemuchina wekugovana kwevhidhiyo iyo mifananidzo yaunotumira kana yekugamuchira inofanirwa kuenzanisirwa kwemashure 10 vasati yabviswa zvachose. Izvo zvinokuita kuti utaure nevanoshamwaridzana navo sa Facebook Messenger.
Iwe unogona kutaurirana neshamwari dzako chete kuburikidza nemifananidzo iyo zvakare inokwanisa kuiona kwemaawa mashomanana vasati vapera nokusingaperi pasina kusiya chero mararamiro emamwe emafoni enyu. Munguva pfupi, purogiramu yacho ine zvinyorwa zvitsva zvinoenderana nezvakasiyana uye zvinonakidza zvakadai se Discover Messages kune vashandisi varo. Snapchat akawana mukurumbira wakawanda pakati pemamiriyoni evashandisi nekuda kwemhaka yokuti iwe haugoni kudzorerazve mharidzo yako mushure mekutora nguva. Asi zvakanyatsojekesa izvi chaizvoizvo? Iwe unogona kuwanazve kubviswa kweSpapchat mharidzo here?
Zvisinei, zvinokwanisika kuti chero munhu upi zvake awane mapikicha nemavhidhiyo kana vabviswa? Hongu, zvinogoneka! Hewa nzira dzakawanda dzokukubatsira kuti uwane Snapchat mifananidzo kana vhidhiyo kuitira kuti kunyange kana deta iri kubviswa, kuchine mukana wekuwana kuti data iwanezve. Heano nhungamiro yakazara inokuratidza kuti ungawana sei mhemberero dzekare dzeSpapchat nokukurumidza nyore.
Snapchat inzira inokurumidza yekugovana nguva dzinofadza neshamwari dzako. Snapchat inopa chimwe chinhu chinoshamisa pane iwe unogona kudzora nguva yakareba shamwari dzako dzingaona sei shoko rako raunoda kuisa timer kusvika kumasekondi gumi uye uzvitumira kune ani zvake waunoda. Snapchat iri nyore kushandisa shanduro uye shanduro yezvino 9.16.2.0 inowanikwa kune vashandisi ve Android.
Nzira Yokuwana Nayo Dhenda paNyoka?
Snapchat chirongwa chakakurumbira chinoita kuti utore mapikicha, mavhidhiyo uye ugogovana navo neshamwari dzako. Iyi purogiramu inokubvumira kutumira mifananidzo kuitira kuti mupikiri aikwanise kuitarira kwehuwandu hwehuwandu hwenguva uye anotsvaira zvachose. Kunyange zvazvo mharidzo yeScapchat inonyangarika kubva pane yako app Snapchat, haisati yasimbiswa kubva pafoni yako. Hewa maitiro maviri kuti awane kana kutora data yakabviswa kana mharidzo pane Snapchat. Itarise!
Method 1: Rezve Deleted Data pane Snapchat
Kunyange kana iwe ukabvisa mharidzo paNigapchat, inenge yakachengetwa kukuyeuka kwefoni yako ne .nomedia kuwedzera. Iko rudzi rwekuwedzera runoreva kuti mamwe mabasa ose anofanira kuregeredza. Muchidimbu, zvinoratidzika sekuti mifananidzo nemavhidhiyo hazvipo sezvo zvabviswa. Zvisinei, vanoramba vachiri pafoni yako. Izvo zvakajeka zvikuru zvakajeka kuwana rufadzo kune aya mafaira zvakare.
Nhanho 1: File File
Kana uchida kudzorera mharidzo yeScapchat kubva pafoni yako iwe unoda kudzorerazve mafaira kuitira kuti .nomedia extension ingabviswa.
Izvi zvinogona kuitwa kuburikidza nefaira mumiririri wefaira. Iwe unogona kuwana yakanakisisa File Manager apps panzvimbo yeGoogle play, kana kuti iwe unogona kukopa APK kubva paInternet.
Kana uri kushandisa chipangizo cheApple ipapo iwe unoda jailbreak foni yako uye uwane yakakodzera faira meneja app.
Zvimwe zvepamusoro pefaira mumiririri zvinyorwa ndeye Astro File Managers, OI mufayiri wefaira uye File Expert.
Nhanho 2 - Kudzokorora Faira
Ongorora mafaira aya nomedia kuwedzerwa pane yako faira. Mhando dzose dzezvibvumirano zvinongorega faira iyi faira, iyo inoita kuti data isingaonekwi. Izvi zvichava zvose zvese zvese kubva kuna Snapchat.
Sarudza shoko rimwe nerimwe uye ugovaudzazve kuti vabvise kuwedzera.
Izvi zvinofanira kutendera mamwe maitiro mapurisa uye kuratidza zvidhori kuitira kuti uone zvakare.
Ingozvigadzira kuitira kuti ugone kuwana deta yakabviswa uye uwanezve Snapchat mifananidzo.
Method 2: Kushandisa Dumpster App
Iyo dumpster iyi app yeGoogle Play Store iyo inoshanda seyodzokorora kubhesi yako ye-android. Dumpster inokupa iwe kukwanisa kubvisa zvinhu zvakabviswa kubva pane yako Android device iyo inosanganisira mifananidzo, vids, audio, pdf, zip, mp3, mp4, ppt, doc, avi, mpg, jpg, rar uye dzose faira mafaira. Hakuna chikonzero chekudzikisa chigadziro chako uye kunyange Internet connection haitombomirwi zvachose! Iyi ndiyo yakanakisisa yepurogiramu inogona kuwana deta yako yakabviswa pane yako Snapchat.
Pakutanga, kuisa app Dumpster pafoni yako ye-Android.
Zvadaro, vhura mafoto kana mavhidhiyo akazarurwa.
Iye zvino, unofanirwa kuenda kuDappster purogiramu yaunogona kuwana mifananidzo kana mavhidhiyo.
Ingoshandura PURI yeDumpster kuitira kuti uwane mavhidhiyo eScapchat kana kuti mafananidzo paDumpster.
Cherechedza: Iyi nzira inoshanda chete kana iwe usina kuzarura mafoto kana mavhidhiyo eScapchat pakutanga.
Nzira yekuwana sei Snapchat data pamusoro peIOS?
Kuti uwane Snapchat mharidzo kubva kune Apple maitiro se iPhone kana iPad, shandisa iPhone Data Recovery app neFoneLab. Iyi purogiramu inogona kukubatsira kuti uwane data yakabviswa yakadzorerwa kubva kuAs iPhone yako kana iPad.
Iwe unogona kushandisa iyi purogiramu kuti uwanezve data kubva kune zvakasiyana-siyana apps. Muchidzidzo ichi, tichashandisa kuti tigadzire Snapchat Data kubva kuPhones.
Matanho ekutevera kuti awanezve Snapchat data kubva kuIOS device:
Dhawunirodha uye gadza iyo FoneLab chishandiso pane yako Windows PC kana Mac
Shandisai iOS device (iPhone / iPad / iPod) kumakombiyuta ako uchishandisa kabha USB
Kana imwe foni inopinda Kudzoka kubva paIOS device mode, kambani Start Scan inowanika pafoni yako.
Dhinda "Start Scan" bhatani kuti utange kupenya.
Mushure mokunge nzira yekutsvaga yapera, sarudza chikamu kubva pane menyu waunoda kudzorera deta. Muchiitiko ichi, sarudza "Mharidzo yeScapchat"
Iye zvino sarudza mharidzo yose yaunoda iwe yaunoda kuti uwane zvakare uye chengetedza bhora rekuwana kuti uwane ruzivo rwakabviswa.
Sarudza nzvimbo yekuenda iyo faira uye tarisira kusvikira mharidzo yeScapchat yadzorerwa.
Nzira yekuwana sei Snapchat mharidzo pa Android?
FoneLab inogadzirawo data yekutsvaga zvigadzirwa zveAroid devices. Tinogona kushandisa nyore nyore FoneLab sarudzo yekuwana Snapchat mitemo kubva kuAroid devices.
Tevera matanho aya akareba kuti uwane Snapchat mharidzo pa android:
Dhawunirodha uye gadza iyo FoneLab Android Data Kudzoreredza Turu ye Windows PC kana Mac
Enda kumigadziri yako yefoni uye shandisa USB kubvisa maitiro pane yako Andoird device.
Zvadaro uchishandisa USB cable, shandisai android foni yako kumakombiyuta.
Chirongwa cheFoneLab chichaona iyo Android device yako
Enda kuGoogle Data Data Recovery tab uye sarudza "Tsvaga uye Mamwe Mashoko"
Foni yako ichadzurwa kana ukasarudza sarudzo
Zvadaro, uchaona mifananidzo yakabviswa
Sarudza mharidzo yakadzingwa yakabviswa, uye chengetedza paBhota Rokudzorera
Zvaunoda mharidzo zvichadzorerwa.
Aya ndiwo maitiro maviri ari nyore kuti awane kana kutora data yakabviswa semifananidzo uye mavhidhiyo paNyoka. Tarisira iyi tutorial inokurudzira iwe nenzira yakanakisisa yekudzorera kana kutora mifananidzo yakabviswa nemavhidhiyo muNyoka yekugoverana kwevhidhiyo yeShitapchat. Farira Kusvetuka!
Nzira yekuwanazve mafaira akadzingwa paMAC OS X